1100 HO ny famoahana alim-borona madio ho an'ny pizza panamainty 0.7mm - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia co., Ltd
1) Legge: 1. 3. andian-dahatsoratra
2) Tempoly: H18 .H24 .H32 .H112. O .F
3) hateviny: 1.0-4.0mm
4) OD: hatramin'ny 1200mm
Mpanjifa lehibe sy mpamatsy ny alim-pitaratra aluminium monina ao amin'ny China Alloy: 1000series, 3000series.
Elektronika, fitaovana fitsaboana, fanafody, fiara mandeha amin'ny ordinatera, fitaovana an-trano, famokarana fiara, fanodinana, fanorenana ary fanontam-pirinty, indrindra ho an'ny fitaovana fikarakarana, toy ny fanilo tsy hikirakirana, fitaovam-pisakafoanana ary fitaovana, toy ny lampshade, hikirakira.
Ny kalitao sy ny fotoana iarahana manome antoka
1. Professional QC ho an'ny alaina / alimina alim-bobina sy ny vidiny sy ny entana, jereo amin'ny fizotran'ny famokarana mba hiantohana ny kalitao sy ny fotoana famenoana. Ny olana dia tsy mety ho tavela amin'ny mpanjifa.
Tolotra mpanjifa tsara tarehy.
2. Ny tanjonay dia ny hanomezana tolotra, mazava tsara ary ara-potoana, fa koa ny fihenan'ny vola ho an'ny mpanjifa mba hahazo ny fanohanana sy ny fitokisana.
Mampahery ny fanompoana aorian'ny varotra
3. Ny entana rehetra ananantsika dia mitazona io finoana io mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika, manolotra torohevitra matihanina, mamokatra vokatra avo lenta sy alim-bary vaovao. Miangavy anao mba hifandray aminay raha misy olana na fanontaniana.